Ujeedada Ka Dambaysa Xidhiidhka Ay Kenya La Samaysanayso Somaliland Oo La Shaaciyey | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ujeedada Ka Dambaysa Xidhiidhka Ay Kenya La Samaysanayso Somaliland Oo La Shaaciyey
Ujeedada Ka Dambaysa Xidhiidhka Ay Kenya La Samaysanayso Somaliland Oo La Shaaciyey
Wargeyska ugu weyn ee Nairobi kasoo baxa ee Daily Nation ayaa maanta ciwaan far waaweyn ah ku yidhi “Dowladda Kenya oo muruqeeda ku tijaabinaysa Soomaaliya”.
Wargeyska oo ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhacay, sida mas’uuliyiintii Soomaalida ahaa ee garoonka Jomo Kenyatta laga celiyay, ayaa qorey in uu helay xog la xidhiidha in dowladda Kenya ay go’aansatay in ay xidhiidh toos ah la yeelato maamulada ka jira Soomaaliya, iyada oo hareer maraysa dowladda federaalka Soomaaliya.
Saansaanta arrintaas ayaa durba muuqata iyada oo ay Nairobi ku suganyihiin wafti balaadhan oo ka socda jamhuuriyadda iskeed isku magacoowday ee Somaliland , kuwaas oo xubno ka mid ah ay BBC-da u sheegeen in ay aad u wanaagsantahay rajadii ay ka qabeen in la aqoonsado.
Somaliland ayaa bilo ka hor magaalada Nairobi ka furatay xafiis dublamaasiyadeed, iyada oo ay Kenya sheegtay in ay wakiil u dirsan doonto magaalada Hargeysa
Falanqeeye siyaasadeed Cabduwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa sidoo kale BBC-da u sheegay in dowladda Kenya ay aad u danaynayso arrimaha Jubbaland, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamo ka socda Kenya.
Waxa uu intaas ku daray in khilaafka hadda taagan uu qeyb ahaan salka ku hayo arrimaha doorashooyinka Jubbaland, wuxuuna yiri “Arrinta kale ee la isku haysto ee muranka wayn uu ka taagan yahay waa arrinta Kismaayo, dawladda Kenya waxay taageeraysaa Axmed Madoobe wax qarsoonna maahan, waxayna doonaysaa in aan meesha laga qaadin, halka dawladda Soomaaliya ay diiddan tahay in Axmed madoobe uu sii joogo”.
Wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in ujeedka Kenya ay ula macaamilayso maamulada ay tahay si ay cadaadis dheeraad ah u saarto dowladda Federaalka oo ay Kenya ka weysay waxyaabihii ay ka doonaysay.
Waxa uu wargeyska soo qaatay sharcigii batroolka ee dhawaanta la ansixiyay , wuxuuna intaas ku daray in ceelal shidaal oo ku yaala badda ay labada dal isku heystaan..
Wargeyska wuxuu sheegay in uu ka warhayo in uu jiro go’aan cadaadiska Soomaaliya la saarayo qeyb ka ah oo ku saabsan diyaaradaha laga leeyahay Soomaaliya in lagu soo rogo shuruuc adag oo xanibaad ah.
Horey waxa ay Kenya dib usoo celisay in duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya ay soo maraan magaalada Wajeer, halkaas oo lagu soo baaro. Talaabadan ayay Kenya ku fasirtay mid amniga lagu xaqiijinayo.
Waxa kale oo uu wargeyska sheegay in qorshaha uu ka mid ah in ciidamada Kenya si qorsheysan looga soo saaro dhulkii ay ka saareen Alshabaab sanado ka hor, si culeeska loogu kordhiyo dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Kenya ayaa bilihii dhowaa kasoo baxay deegaano dhawr ah oo ku yaala gobolka Gedo, sida deegaanka Buusaar iyo Faafaxdhuun.
Heshiisyadii la galay
Wargeyska oo qoraalkiisa bogga 4aad kusoo baxay sii wata ayaa sheegay in inta ay Soomaaliya diidantahay in wadahadal laga galo muranka dhul badeedka, in Kenya ay mid mid uga bixi doonto dhammaan heshiisyadii la galay.
Heshiisyadan waxaa ka mid ah kuwa ganacsi, socdaalka iyo is dhexmarka dadka. Iyo waliba heshiis ku saabsan arrimaha qaxootiga.
Previous articleProf samatar oo Daboolka ka Qaaday Sababta uu Ugu Biiray Xisbiga iyo Barmaamijkii Siyaaasadeed ee Tabliiqiga Cali Khaliif ay wada galeen
Next articleAmiirkii boqortooyada Sacuudiga ee ‘faroxumeynta’ kula dhaqaaqay ciyaartoy caan ah